Osteochondrosis nke thoracic spain mgbaàmà na ọgwụgwọ
Osteochondrosis nke mpaghara thoracic
A na-ewerekarị ụdị osteochondrosis kacha nta na-ahụkarị dịka osteochondrosis nke ọkpụkpụ azụ azụ. Otú ọ dị, taa ọrịa a aghọwo ihe a na-ahụkarị. Afọ ole na ole gara aga, osteochondrosis nke mpaghara thoracic bụ ọrịa nke ndị agadi, ma n'ime afọ ndị gafeworonụ, nchọpụta a agbasawo n'etiti ndị na-eto eto na ọbụna ụmụaka.
Gịnị bụ ọrịa a
Osteochondrosis nke spine thoracic na-akpata site na mgbanwe dystrophic na degenerative nke na-eduga ná nkwụsị nke ngwa ligamentous, vertebrae agbata obi na nkwonkwo ma nwee ike imebi ha. Ma ọkpụkpụ na ngwa ligamentous, mọzụlụ na cartilage na-ata ahụhụ site na ya.
Ọ nwere ọtụtụ atụmatụ a kapịrị ọnụ:
Ọkpụkpụ thoracic na-arụ ọrụ dị iche na olu na mpaghara lumbar n'ihi enweghị ọrụ. Nke a bụ n'ihi peculiarity nke Ọdịdị nke obi, ebe vertebrae na ọgịrịga na-etolite a siri ike Ọdịdị, nke na-nnọọ ntụkwasị obi na-echebe site na mmerụ ahụ.
Tụkwasị na nke a, akụkụ a nke ọkpụkpụ azụ na-enwe obere nchekasị ma e jiri ya tụnyere olu ma ọ bụ ala azụ. N'akụkụ a, nsogbu ndị dị ka mpụta diski, nkwụsị nke vertebrae ma ọ bụ hernia intervertebral adịghị adịkarị na ya.
Ihe ndị a niile na-eme ka o sie ike ịchọpụta osteochondrosis n'oge n'ihi enweghị mgbaàmà. Dị ka a na-achị, osteochondrosis nke mpaghara thoracic na-amalite igosipụta onwe ya mgbe ọrịa ahụ dịlarị.
Osteochondrosis dị ize ndụ karịsịa maka ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma. N'ihi ọrịa, usoro musculoskeletal ha na-emebi ọbụna tupu e guzobe ya ma wusie ya ike.
Mgbaàmà nke ọrịa ahụ
Ndị ọrịa nwere ọrịa a na-emekarị mkpesa maka njirimara njirimara ndị a:
ihe mgbu nke ọdịdị na-adịghị mma ma ọ bụ na-egbu mgbu na ubu ubu, ha na-abawanye ma ọ bụrụ na ahụ dị ogologo na-enweghị mmegharị, na-eku ume miri emi na ibuli ibu;
mmetụta nke tightness na obi;
ọtụtụ mgbe mgbu na-abụ eriri;
enwere nhụsianya n'akụkụ ụfọdụ nke ahụ;
obere okpomọkụ nke ala ahụ;
afọ ọsịsa, afọ ntachi, flatulence;
mgbu na nkwụsị nke akwara abdominal;
ọgbụgbọ, nrekasi obi.
Ụfọdụ ihe mgbaàmà nke osteochondrosis bụkwa ihe e ji mara ọrịa ndị ọzọ dị ize ndụ, dịka ọmụmaatụ, angina pectoris, nkụchi obi, ọnya afọ, oyi baa, wdg. Ya mere nyocha nke ndị ọkachamara dị warara dị mkpa.
A na-ekewakarị mgbu na-akpata ọrịa a ụzọ abụọ: dorsago na dorsalgia.
Dorsago na-ezo aka na mgbu dị nkọ, mberede mberede. Ndị na-arịa ọrịa a bụ ndị na-anọ ọdụ ogologo oge, na-ehulata n'elu tebụl. N'oge mgbe mmadụ na-ebili n'ebe ọrụ, a na-egbu mgbu na-apụta, nke na-abawanye na iku ume ma na-egbochi ọrụ nke ọkpụkpụ azụ.
A na-eji dorsalgia na-amụba ngwa ngwa nke mgbu. Ruo ọtụtụ izu, onye ọrịa ahụ nwere ike ịnwe naanị ahụ erughị ala na obere mgbu. Mmetụta na-egbu mgbu na-esiwanye ike site na iku ume miri emi ma ọ bụ tilting nke ahụ, n'oge ụra ma ọ bụ ogologo oge ọzọ nke ahụ na-enweghị mmegharị.
Ihe na-akpata osteochondrosis nke mpaghara thoracic
Ihe na-akpata ọrịa ahụ bụ mgbanwe pathological na nhazi nke ọkpụkpụ azụ, ha na-emebi ọdịdị na-emetụta ma ọkpụkpụ, cartilage na anụ ahụ. Ọrịa pathological nwere ike ime:
intervertebral hernia, oke ibu;
eketa predisposition na spinal pathology;
mbibi nke cartilage;
nsogbu nke ọbara na ọkpụkpụ azụ;
ibu oke ma ọ bụ enweghị uche, ibuli ihe dị arọ na-ekwesịghị ekwesị;
ndụ ịnọkarị otu ebe, mmerụ ahụ, curvature nke spain.
Ọgwụgwọ osteochondrosis kwesịrị ịmalite na nleta onye na-ahụ maka akwara ozi. N'ihi n'eziokwu na mgbaàmà ya yiri nke ọrịa ndị ọzọ, ọ dị mkpa ka ewepu ọrịa ndị ọzọ dị njọ. Dị ka a na-achị, usoro ọgwụgwọ ahụ nwere usoro abụọ:
Mwepụ nke ọrịa mgbu.
Mwepụ ihe ndị na-akpata ọrịa ahụ.
A na-eji ọgwụ mgbochi mkpali na-abụghị steroidal eme ihe iji belata ihe mgbu ma belata spasms muscle. N'ọdịnihu, n'okpuru nlekọta nke dọkịta, a na-eme ọtụtụ usoro ọgwụgwọ, gụnyere gymnastics, nri, usoro physiotherapy na, ọ bụrụ na e nwere nnukwu ọrịa pathology, ịwa ahụ.
Ọ dị mkpa ịmara! Ọ dị oke egwu ịchọpụta n'onwe ya na ịgwọ osteochondrosis nke spine thoracic. Otu n'ime pathologies na-akpata ọrịa a bụ intervertebral hernia, ọgwụgwọ nke a na-eme naanị site dọkịta, ọtụtụ mgbe ịwa ahụ.
Mgbe ụfọdụ n'ime oge nke oke iwe, onye ọrịa ahụ na-enwe mmetụta dị egwu nke na enwere ike ịkwụsị ya naanị n'ụlọ ọgwụ. Ọ bụrụ na ihe mgbu na-anabata ma na-agwọ ya na ọgwụ analgesic, mgbe ahụ, a pụrụ ime ọgwụgwọ n'ụlọ, ma n'okpuru nlekọta nke dọkịta. N'oge nnukwu ọrịa ahụ, onye ọrịa kwesịrị:
debe izu ike akwa;
kpachie mmega ahụ;
Mee ịhịa aka n'ahụ;
jiri mmanu mmanu, gels na ude akwadoro;
rie nri dị mma, na-ebelata oke abụba na iwepu mmanya;
soro ndenye ọgwụ nke onye ọkachamara wee jiri ọgwụ dịka ndenye ọgwụ.
Mgbe gị na onye na-ahụ maka akwara na-emekọrịta ihe, enwere ike ịme mmega ahụ ọgwụgwọ na physiotherapy.
Otu ihe dị mkpa na ọgwụgwọ osteochondrosis bụ izu ike zuru oke nke ọkpụkpụ azụ n'oge ụra. Iji mee nke a, ị kwesịrị iji ngwaọrụ orthopedic: ohiri isi pụrụ iche, matraasi orthopedic. Ngwa ihi ụra ahọpụtara nke ọma ga-enyere ọkpụkpụ azụ aka iwere ọnọdụ ziri ezi ma gbakee.
Ntị! Ndị mmadụ na-achọpụta na osteochondrosis ekwesịghị ịhọrọ matraasi na-esiwanye ike, ọ nwere ike inye aka mee ka ọkpụkpụ anụ ahụ dị n'akụkụ ọkpụkpụ azụ.
Ọgwụ maka ọgwụgwọ
Nzọụkwụ mbụ na ọgwụgwọ osteochondrosis kwesịrị ịbụ ihe mgbu maka onye ọrịa. Maka nke a, a na-eji ọgwụ ndị na-abụghị steroidal nke dọkịta nyere ya. A ghaghị iji ọgwụ ndị a mee ihe nke ọma na-agbaso ntuziaka ahụ, n'ihi na ha nwere ọtụtụ contraindications ma na-akpata nnukwu nsogbu na tract digestive.
Ọ dị mma icheta na ha anaghị emeso ihe kpatara ọrịa ahụ, ya mere, mgbe nnukwu oge nke ọrịa ahụ agafeela, ọ dị mkpa ịnọgide na-agwọ ọrịa na ụzọ ndị ọzọ dọkịta tụrụ aro.
N'otu oge na ịṅụ ọgwụ mgbu, enwere ike ịnye usoro ọgwụgwọ vitamin. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị na-eme ka ahụ dị nro ga-enyere aka ịkwụsị spasm site na uru ahụ emetụtara. Ọgwụ ndị a adịghị n'okpuru nchịkwa onwe onye ma na-enye ya naanị site na dọkịta na-abịa.
Mgbe ewepụrụ ihe mgbu ahụ, usoro nke iweghachi mgbasa ọbara na inye anụ ahụ mebiri emebi amalite. Iji mee nke a, a na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe na-eweghachi njikọ dị n'etiti njedebe akwara na arịa ndị mebiri emebi.
Nhọpụta ọgwụ maka ngwa mpụga bụ otu n'ime ụzọ a na-ejikarị eme ihe maka ọgwụgwọ osteochondrosis. Ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na-enye ọtụtụ mmanụ mmanụ. A na-eji mmanụ aṅụ mgbochi mkpali na analgesic. Ọ bụghị naanị na mmanụ aṅụ ndị a nwere ihe analgesic, kamakwa na-enyere aka belata mbufụt, belata ọzịza ma weghachite mmegharị nkwonkwo, na-ewepụ isi ike ha.
Ude nke ihe mgbagwoju anya, na mgbakwunye na ihe ndị dị n'elu, nwere ọgwụgwọ, antithrombotic na antimicrobial mmetụta. A na-eji mmanụ aṅụ dị otú ahụ kacha mma n'ehihie, na-eji ha na mpaghara akpụkpọ ahụ emetụtara. Mgbe etinyere ude ahụ, enwere ike iji akwa ịchafụ kpuchie ebe ahụ na-egbu mgbu. Ude ndị a na-arụ ọrụ nke ọma n'oge mgbaghara, mgbe mgbu adịghị oke, kama ọ na-egbu mgbu.
N'ime oge siri ike nke ọrịa ahụ, mgbe onye ọrịa na-enwe nnukwu mgbu, mmetụta nke mbadamba nkume iji belata mgbaàmà nwere ike ọ gaghị ezu. N'ọnọdụ ndị a, dọkịta na-aga na-enye iwu injections nke ọgwụ nwere ihe analgesic na mgbochi mkpali.
Ọzọkwa, a ga-emerịrị usoro ịgba ọgwụ vitamin B.
Ọgwụgwọ na ndiife ịgba akwụkwọ
Ntụtụ na-atụgharị maka ịgbanye ntụ ọka ga-enyere gị aka ịkwụsị mgbu ma chefuo ọrịa a ogologo oge. Iji nweta nsonaazụ dị mma, ị gaghị adị umengwụ ma nye usoro ahụ 15-20 nkeji kwa ụbọchị. Ọzọ, kpatụ ntụtụ na-atụgharị n'ubu abụọ, ọkpụkpụ azụ na ubu. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-etinye ntụtụ na-atụgharị n'elu siri ike na ọbụna n'elu, ọkacha mma n'ala ma dina na ya na azụ gị. Tụgharịa ntụtụ na-atụgharị maka nkeji 10-15.
Ihe kacha mma dochie mmanụ mmanụ ụlọ ahịa ga-abụ ịhịa aka n'onwe ya.
Were 200 ml nke cologne atọ, ọgwụ na mmanya camphor. Gwakọta mmiri niile n'ime ite ma gbakwunye 100 g nke okooko osisi calendula gbajiri agbaji. A na-emechi ite ahụ ma hapụ ya n'ebe gbara ọchịchịrị maka izu abụọ. Njikere ịhịa aka n'ahụ nwere ike iji osteochondrosis na-ete ebe na-egbu mgbu: ubu, azụ, obi, wdg.
Were 1 tsp. ntụ ntụ hop cones na mix na gbazee anụ ezi abụba na a ruru 1: 1. Ude a na-ete akụkụ ahụ na-egbu mgbu nke ọkpụkpụ azụ.
Tincture nke ọnụ
Wunye 80 g nke akwụkwọ lingonberry na otu liter nke mmiri esi. Ekwesịrị itinye ngwakọta ahụ ma ọ dịkarịa ala awa 2.
Mgbe ahụ, a ga-ehichapụ infusion ma jikọta ya na 350 ml nke vodka. Na obere okpomọkụ, a ghaghị ikpokọta ngwakọta ahụ na okpomọkụ nke ogo 60, wee hapụ ya ka ọ gbanye maka nkeji 10.
Ọkara iko nke tincture ga-esi na ya pụta kwesịrị ịṅụ mmanya na-abaghị uru ọ dịkarịa ala ugboro atọ n'ụbọchị. Usoro nnabata bụ ọnwa 7-8.
Were 3 tbsp. l. mkpụrụ osisi viburnum, 2 tbsp. l. chamomile okooko osisi na birch epupụta, 1 tbsp. l. Calendula na elecampane.
Na thermos, jikọta ngwa nri akwukwo nri na otu liter nke mmiri esi.
Ịkwesịrị ịkwado ngwakọta ahụ ma ọ dịkarịa ala awa atọ, wee were otu iko ugboro atọ n'ụbọchị maka otu ọnwa.
Ntị! A ghaghị ime ọgwụgwọ na ọgwụgwọ ndị mmadụ na mgbakwunye na ọgwụgwọ nke onye dọkịta na-aga na-enye. Ụzọ ndị ọzọ enweghị ike ịbụ nnọchi zuru oke maka ọgwụgwọ mgbagwoju anya.
Emega ahụ maka ọgwụgwọ osteochondrosis
Mgbe gị na dọkịta kwekọrịtara, ị nwere ike ịmalite ịme ọgwụgwọ ọgwụgwọ. Tupu ịme mmega ahụ, ọ dị mkpa ịme ọkụ ọkụ: ogwe aka na ụkwụ na-atụgharị, na-atụgharị ma na-atụgharị ọkpụkpụ, na-atụgharị isi. Nke a ga-enyere aka kpoo ọkụ ma dozie uru ahụ na akwara. Gymnastics n'onwe ya gụnyere ọtụtụ mmemme:
Na-eguzo n'ọnọdụ kwụ ọtọ, jiri nwayọọ nwayọọ welie ubu gị, wee jiri nwayọọ nwayọọ belata ha.
Na mmega ahụ ọzọ, a ga-ebuli ubu ma gbadaa ọzọ, nke mbụ n'aka ekpe, mgbe ahụ aka nri.
Bilie ọtọ ma gbatịa aka gị n'akụkụ ahụ. Jiri nwayọ dabere n'aka nri na aka ekpe ọzọ, na-ewepụghị aka gị n'ahụ.
Iji mee mgbatị ahụ, dina n'afọ gị ma welie obi gị n'ala. N'otu oge ahụ, ogwe aka kwesịrị ịgbatị n'ihu n'elu isi. Ịkwesịrị ịnọ n'ọnọdụ a maka sekọnd iri. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-ejide aka n'azụ ma jidekwa ọzọ maka 10 sekọnd.
Nọdụ ala n'oche nwere azụ kwụ ọtọ, kwụ ọtọ. Zuo ike na ya ma gbalịa ịgbada.
Ntị! Ọ bụrụ na mmega ahụ na-ebute gị ọgụ siri ike nke mgbu, ị kwesịrị ịkwụsị ozugbo wee zuru ike maka nkeji 5.
Osteochondrosis bụ ọrịa siri ike, nke dị mfe igbochi karịa ọgwụgwọ. Iji chebe ọkpụkpụ azụ gị, ị ga-agbaso ọtụtụ ndụmọdụ:
Mmega ahụ nke ezi uche dị na ya. Ọ bụrụ na ọrụ gị gụnyere ịnọdụ ọdụ ogologo oge, jide n'aka na ị ga-ezumike iji kpoo ọkụ. Gaakwu ije na ikuku ọhụrụ.
I kwesịghị ibuli ibu, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mee ya nke ọma.
Nsogbu na spine ga-enyere aka izere nri na-adabere na oriri nke ihe oriri bara ụba na protein, na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke abụba abụba. Na-ewusi ọkpụkpụ azụ ike nke ọma na ngwa ligamentous aspic, aspic na jelii.
Lelee ibu gị, ndị buru oke ibu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na-eme onwe ha nsogbu na ọkpụkpụ azụ.
Maka ihi ụra, jiri akwa orthopedic na ohiri isi.
Ọgwụgwọ osteochondrosis nke mpaghara thoracic ga-adị irè site na ntinye aka jikọtara ọnụ. Jide n'aka na ị ga-ejikọta ọgwụgwọ nke dọkịta nyere ya na usoro ọgwụgwọ ọzọ na mgbatị ahụ na ịhịa aka n'ahụ. Mgbe mgbaàmà ahụ kwụsịrị, echefula ime ihe mgbochi niile iji gbochie nlọghachi azụ.